2. El Cid anodzokera kukamba. 5 enganonyorwa nezve chimiro chake | Zvazvino Zvinyorwa
Mune izvi chinyorwa chechipiri yakatsaurirwa kumufananidzo we cid, Ndinozviongorora izvi 5 enganonyorwa yakanyorwa pairi. Mumwe ndeumwe biography de Martinez Diez uye chimwe chikumbiro che famba mumigwagwa yaaifamba, naJosé Manuel Grouting. Vamwe vaviri vari nhoroondo dzenhoroondonaJosé Luis Corral uye Ricard Ibanez, uye, pakupedzisira, a utsinye yaGunyana: iyo ya Perez-Reverte.
1 Nhoroondo yeCid - Gonzalo Martínez Díez
2 Nzira yeCid - José Manuel Lechado
3 Sidi - A Frontier Nyaya - Arturo Pérez-Reverte
Nhoroondo El Cid - Gonzalo Martinez Diez
Uyu munyori anobva kuBurgos, mudzidzi weRoyal Academy yeNhoroondo uye nhamba yeFernán González Academy, akanyora izvi rinokurudzira biography nezveCid. Zviri nezve kudzidza kwakazara kwazvo nezvake vanokudzwa vechokwadi Castilian. Biography yemufananidzo wegamba rekare, pasina ngano nhetembo, uye nemimvuri nemwenje yezana ramakore regumi nerimwe. Yakavakirwa pa zvipupuriro zvezvakaitika aigara kana aikwanisa kuzviita naye.
Nzira yeCid - Jose Manuel Lechado
Ichi ndicho Gwara rekufamba, nebhasikoro kana vakatasva bhiza, kunyangwe zvichigona kuitwa nedzimwe nzira dzemotokari izvo, zvisinei, zvinodzivirira mufambi kuti asakoshese ruzivo rwakanyanya. Uye ndezvekuti zvese zvakanyatso rongedzwa mubhuku. Kubva ku zvinhu kupfeka sei mishonga Zvakakosha uye nzira dzekuzvitenderedza munzvimbo imwe neimwe kana iwe ukapfuura ne migwagwa yekumaruwa, zvinova ndizvo zvaanorayira. KANA sei uye kupi kukamba kana mufambi afunga nezve iyi sarudzo.
Inotsanangurawo iyo gastronomy yenzvimbo imwe neimwe uye pane ipfupi kuongororwa kwehuwandu hwevanhu. Zvese zvinotevera iyo migwagwa nematunhu kuburikidza iyo iyo Cid anofanira kunge akapfuura munzira yake kuenda kuutapwa.
Sidi - Iyo Border Nhau - Arturo Pérez-Reverte
Iri izita idzva remusoro rinonyorwa nemunyori munyika inotevera inotaura chiSpanish September 18. Dzokera ku nhoroondo yenhau uye anosarudza kudzokera kune izvo zvinozivikanwa seCentury of the Crusades. Iyo nyaya kwainotaura kunakidzwa kwemurwi, uyo, akamanikidzwa kuenda muutapwa, achafanira kuenda uye famba nemuenzi anomuremekedza nekumutevera.
Hunhu hwakagadzirwa kubva pamufananidzo weCid, nekuti hapana kutaurwa kwakananga kunoitwa nezvake. Munyori anonongedzerawo izvo Iyi haisi nhoroondo yenhoroondo nezve knight uye zvaakashandisaAsi nyaya yemurume anova mutungamiri. Iyi snippet:
“Vakakora muchimiro, vakaomarara zvisingaite muhunhu uye nehungwaru, vaive varwi uye havana kumbobvira vazviti ndevamwe. Vakasiyiwa netsaona, vakafunga nezve hupenyu nerufu, ivo vakateerera nenzira yechisikirwo vasina fungidziro yekutamba nenjodzi pavari.
Munyori akasarudza El Cantar del Mío Cid uye mamwe madiki asinganyanyo kuzivikanwa nezvake kuti ataure nyaya inotiratidza izvo kanganwa kuti tine ngano yedu uye ngano dzakakurumbira uye magamba. Uye anozvisanganisa zvese ne chinoshamisa masimba munhoroondo ye vakadzi vana iyo inokunda chipingamupinyi cherufu uye kubudirira dzosa kubva kune rimwe divi mweya weCid.
Asi uyu anodzoka arasa pfungwa dzese dzekuti aive ani uye ivo dzinofanira kukuyeuchidza hwaive hupi hupenyu hwake: hudiki hwake se squire uye zvaakatanga kuuya, zviito zvake semureza kuna mambo, hondo dzake, kukunda kwake nekuodzwa mwoyo kwake. Zvese nekuti kutyisidzira kukuru kuri pamusoro penyika.
Un nzira nyowani kune chaiko nhoroondo ye epic nhamba kuburikidza ne Don Diego de Ubierna, murondedzero anotiudza ruzivo rwake naEl Cid uye zvinotiratidza mumwe murume akashinga kudarika miganhu yakamisikidzwa panguva yake, akatyora mirau uye hupenyu hwake hwainakidza kupfuura tsika. Mira kunze se zvakanyanya kuona zvine hunhu zveiyo epic gamba izvo zvakanyanya uye zvirinani zvinomiririra mweya wemuganho uye chakanakira medieval knight.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 2. El Cid anodzokera kukamba. 5 enganonyorwa nezve chimiro chake